बिष्णु माझीको बुवा आमाको मृ'त्युको खबर बाहिरियो, १० दिनलाई भनेर सुन्दरले विष्णुलाई लगे तर फर्काएनन् - Microlink Media::News Media Website
चर्चित लोक गायिका बिष्णु माझीलाई जन्म दिने बुवा आमाको मृ’त्यु ! झन्डै एक वर्ष अघि आमाको मृ’त्यु भयो र त्यस्को ठिक एक महिना पछि बुवाको पनि मृ’त्यु भयो। यतिबेला बिष्णु माझीको माइतीमा दाईको परिवार मात्र रहेछ। आफ्नी नन्द बिष्णु माझी सँग सम्पर्क हुन्छ कि नाई भनेर सोध्दा क्यामरामा भाउजु बोल्न चाहनु भएन तर अनौपचारिक कुरामा बेला बेला बिष्णु संग कुरा कानी भईनै राख्ने उहाले बताउनु भयो।
बिष्णु माझीको तीज गीत चरी जेलैमा हिट भए सँगै पुन बिष्णु माझीको बास्तबिकता के भनेर दर्शक स्व्रोताले बुझ्न खोजिरहेको अवस्था छ। बिष्णु माझीका श्रीमान सुन्दरमणि अधिकारीले बिष्णु माझी लाइ लुकाएर राखे, भनेर चौतर्फी आवाजहरु यति बेला मिडिया भरि उठिरहेको देख्न सकिन्छ। सुन्दर मणि ले बिष्णु माथि अन्याय गरे भनेर अनुमान त गर्न सकिएला तर ठो’कुवा नै गर्न भने सकिदैन, किन भने यस बिषयमा बिष्णु माझीले कतै निबेदन दिएकी छैनन्।
कोहि व्यक्ति नबोल्नु उसको व्यक्तिगत स्वतन्त्रता हो तर दर्शक स्व्रताले नै जन्माएको कलाकार भुमिगत हुँदा उसको जीवनी बारे बुझ्न पाउनु आम व्यक्तिको अधिकार पनि हो। मैले यसो भनिरहदा उनि देखिनु पर्छ नै भन्न खोजेको होइन तर सबैले रुचाएको कलाकार भूमिगत भएको राम्रो होइन। बिष्णु माझीलाई सुरुमै देख्ने व्यक्ति , देख्ने मात्र होइन गाउन पनि सिकाउने व्यक्ति , गाउन मात्र पनि होइन स्वबा प्रथम स्टेजमा पाइला टेकाउने व्यक्ति यी हुन् कुनै जमानामा लाइभ दोहोरीका चर्चित गायक नारायण लेकाली।
आज भन्दा २० वर्ष अगाडी नारायण लेकालिको भेट बिष्णु माझी संग भयो। ३ वर्ष सम्म उनिहरुले संगै गीत गाए र धेरै प्रतियोगिताहरुमा बिजयी पनि भए। नारायण र बिष्णुको जोडी खुप जम्यो त्यो समय, तर उनीहरु दुवैको बिचमा इन्ट्री भयो सुन्दरमणि अधिकारीको। यो भिडियोमा मैले कसरि लागे सुन्दरमणि ले बिष्णु माझि लाई ? कसरि छुट्यो नारायण संगको साथ ! त्यति बेला देखि यति बेला सम्मका केहि घ’टनाक्रमलाई समेटेको छु। भिडियोलाई पुरा हेर्नुहोला। …………..